MODA | Article Detail | ရန်ကုန်မြို့အတွင်းက ကော်ဖီဒိတ်လို့ကောင်းမယ့်နေရာများ
အေးအေးဆေးဆေး ကော်ဖီဒိတ်လေးတွေ ဖန်တီးချင်သူများအတွက်
ချစ်သူစုံတွဲတွေအနေနဲ့ နှစ်ယောက်သား ဆုံတွေ့ကြတဲ့အခါမှာ တချို့စုံတွဲတွေက အေးအေးဆေးဆေးစကားပြောလို့ရမယ့်နေရာမျိုးလေးတွေ ၊ထူးထူးခြားခြားဖြစ်မယ့်နေရာလေးတွေ နဲ့ Romantic ဆန်တဲ့နေရာလေးတွေကို ပိုပြီးတော့ရွေးချယ်တတ်ကြပါတယ်။ First Date မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပုံမှန်တွေ့ဆုံမှူမှာပဲဖြစ်ဖြစ် နှစ်ယောက်သားအတူချိန်းထားကြပြီးခါမှ ဘယ်သွားလို့သွားရမှန်းမသိတွေဖြစ်ခဲ့ရတာမျိုးတွေလည်း ခဏခဏကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒါကြောင့်မို့ ချစ်သူနဲ့ဒိတ်လုပ်တဲ့အခါ သွားစရာ ၊လည်ပတ်စရာနေရာတွေအမျိုးမျိုးရှိတဲ့အထဲကမှ အေးအေးဆေးဆေး ကော်ဖီလေးသောက်ရင်း ၊ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ရင်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Coffee Date မျိုး ဖန်တီးချင်သူတွေအတွက် ရန်ကုန်မြို့အတွင်းက အဆင်အပြင်လှလှ Idea ကောင်းကောင်းလေးတွေနဲ့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်တချို့ကို ရွေးချယ်စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘိုဆန်ဆန်အပြင်အဆင်လေးတွေနဲ့ နှစ်ထပ်အိမ်လေးကိုမှ ချစ်စရာအပင်လေးတွေနဲ့ မွမ်းမံထားတဲ့ အေးချမ်းဆိတ်ငြိမ်တဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးကတော့ စမ်းချောင်းမြို့နယ် ရှင်စောပုဘုရားလမ်းထဲက Leaf Cafeဆိုတဲ့ဆိုင်လေးပါ။ ကော်ဖီသောက်ရင်း ထပ်ပြီးရိုချင်တယ်ဆို‌ရင်တော့ အဲဒီမှာရှိတဲ့ Indoor Plant လေးတွေကို လက်ဆောင်၀ယ်ပေးလို့ရပါသေးတယ်။ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်လည်း တကယ့်ကို Instagramable placeလေးပါ။ မိုးရာသီမှာ ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အပင်လေးတွေကြားကော်ဖီပူပူလေးသောက်ရင်း Date ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Leaf Cafe ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးက အသင့်တော်ဆုံးနေရာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ချစ်စရာ Decorations လေးတွေကို သဘောကျတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်တော့ The Plant House ဆိုတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးကအရမ်းအဆင်ပြေစေမှာပါ။ ‌ဒီဆိုင်လေးရဲ့ တည်နေရာကတော့ ညောင်တုန်းလမ်း စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပင်လေးတွေကြားထဲမှာ ချစ်ရသူနဲ့ ရိုဆန်ဆန်‌လေး ဒိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီcafe လေးကအသင့်တော်ဆုံးပါပဲ ။ FA တွေအတွက်လည်း အဖော်ပြုစရာစာအုပ်လေးတွေထားပေးပါသေးတယ်တဲ့။
တာမွေမြို့နယ် ကျောက်မြောင်း ၊စိတ္တသုခလမ်းထဲက Insta Cafe ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကတော့ နာမည်နဲ့လိုက်အောင်တကယ့်ကို Insta Spot လေးတစ်ခုပါပဲ။Instagram မှာမြင်ဖူးနေကျ နိုင်ငံခြားက ကော်ဖီဆိုင်လေးတွေလို ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ ချစ်စရာ ‌Decorationလေးတွေနဲ့ ၀န်းရံထားတဲ့အပြင် အစားအသောက်ဈေးနှုန်းလေးတွေကလည်း အဆင်ပြေတာကြောင့် ကော်ဖီဒိတ်မယ့်ချစ်သူတွေအတွက် Chillလို့ကောင်းတဲ့ နေရာလေးတစ်ခုထဲမှာ ထည့်ကိုထည့်ထားသင့်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
90s themeလေးတွေနဲ့ Vintage ဆန်ဆန် Decorationsလေးတွေကြားမှာ ကော်ဖီဒိတ်ချင်တဲ့စုံတွဲတွေအတွက် တကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့နေရာလေးတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။စန္ဒရားအိုကြီးတစ်လုံးအပြင် ဂီတာတွေ ၊ စောင်းတွေ၊ လက်နဲ့လှည့်ရတဲ့ဖုန်းတွေ ၊ရှေးဟောင်းနာရီတွေသာမက ထူးထူးခြားခြား Art workတွေနဲ့ အရင်ခေတ်ကအငွေ့အသက်ကိုအပြည့်အ၀ပေးစွမ်းနိုင်မယ့်အဆင်အပြင်တွေကြားမှာ ချစ်သူစုံတွဲတွေအနေနဲ့ ကဗျာဆန်ဆန်လေးရိုချင်တယ်၊ သူများနဲ့မတူတဲ့ ပုံလှလှလေးတွေရချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ပန်းဆိုးတန်းအလယ်ဘလောက် Alibaba ဘေးတိုက် ဒုတိယထပ်မှာရှိတဲ့ ဒီCafeလေးက အရမ်းကိုရွေးချယ်သင့်တဲ့နေရာတစ်ခုလို့ ဆိုပါရစေ။
စမ်းချောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကတော့ တစ်ယောက်တည်းပဲသွားသွား ချစ်သူနဲ့ဒိတ်ဒိတ် အဆင်ပြေစေမယ့် ဆိုင်လှလှလေးဖြစ်တဲ့အပြင် တိချစ်သူတွေအတွက် ချစ်စရာသားသားမီးမီးလေးတွေကလည်းဆိုင်ရဲ့အပေါ်ထပ်မှာစောင့်ကြိုနေပြန်ပါ‌သေးတယ်။ကိုယ်ရော ကိုယ့်ချစ်သူရောက တိချစ်သူဖြစ်တာချင်းတူနေရင် အရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ momentလေးတွေကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ချစ်စရာသားသားမီးမီးလေးတွေနဲ့ဓာတ်ဖမ်းနိုင်မယ့်အပြင် ကော်ဖီပူပူလေးလည်းသောက်နိုင်တာမို့ အရမ်းကိုအဆင်သင့်တဲ့ ကော်ဖီဆိုင်လေးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အပေါ်ထပ်က ကလေးတွေနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင် ၀င်ကြေးလေးတော့ပေးရပေမယ့် သူတို့ရဲ့ချစ်စရာဆီးကြိုမှူလေးတွေက ပေးရတာထက်ပိုတန်တဲ့အပြင် Stressတွေကိုပါပြေပျောက်စေတာမို့ တစ်‌ခါလောက်တော့ မဖြစ်မနေအရောက်သွားသင့်တဲ့နေရာလေးတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါပဲ။
အရက်သမားတွေအတွက် (အဲလေ ယမကာချစ်သူတွေအတွက်) စမ်းချောင်းထဲမှာ ဘားအသစ်တွေ တော်တော်လေးများလာပြီနော်။ နောက်ထပ် Bar တွေကို ဖတ်ကြည့်ချင်ရင်တော့ Part 1 လေးရှိသေးတာမို့ ဒီ Link ကို Click ပြီးကြည့်ပေးပါ။ ဆိုတော့ Part2ကို ဆက်လက်ရေးသားပေးရမယ့် အချိန်လေး ရောက်လို့လာပါပြီ။ သောကြာညတွေ စိုပြေဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်နော်။
Deer Bar & BBQ
စမ်းချောင်း၊ ပဒုမ္မာလမ်းကတော့ ၁၉ လမ်းလို ဖြစ်လာမလားပဲ။ ဘားတွေတော်တော်လေး များလာတာ တွေ့ရပါတယ်။ Deer Bar ကတော့ သိပ်ဖွင့်တာမကြာသေးပါဘူး။ အပြင်ဘက်ပုံစံကိုက ဆိုင်ထဲကို ဝင်လာဖို့ တော်တော်လေးဆွဲဆောင်နေပါတယ်။ မျက်နှာကျက်မှာ မီးဆိုင်းလေးတွေနဲ့ အလှဆုံး Decorate လုပ်ထားတဲ့ Bar လေးဖြစ်ပြီး နှစ်ထပ်ရှိပါတယ်။
ဒီဘားကိုတော့ မသိတဲ့သူမရှိလောက်ပါဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ Rooftop Bar လေးဖြစ်ပြီး အပြင်ဘက်မှာ မထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း အထဲမှာ အေးဆေးထိုင်လို့ရမယ့် နေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ စားစရာနဲ့ Cocktail တော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ မွန်းကြပ်တဲ့နေ့တွေမှာ လေဟာပြင်မှာထိုင်ပြီး အေးဆေး Chill လို့ရမယ့် နေရာလေးတစ်ခုဖြစ်မှာပါ။ ရှင်စောပုလမ်းနဲ့ ဗဟိုလမ်းထောင့်မှာရှိပါတယ်။
Quaraintine ကာလအပြီး လောလောလတ်လတ်ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်လေးပါ။ နိုင်ငံခြားသားအလာများပြီး Decoration ပြင်ဆင်ထားပုံကလည်း လူငယ်ဆန်ဆန် အထာကျလို့နေပါတယ်။ ဆိုင်နေရာကျယ်ဝန်းပြီး အခန်း အပွင့်ပုံစံမို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ကွက်တိပါ။ ဒီဆိုင်လေးကတော့ ပဒုမ္မာလမ်းထဲမှာပါ။
Gay တွေကို Recommend ပေးချင်တဲ့ Bar လေးပါ။ LGBT တွေနဲ့ LGBT တွေကို လက်ခံအားပေးတဲ့သူတွေ အများဆုံးလာတဲ့ Bar လေးဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ LGBT Event အချို့လည်း ကျင်းပတတ်တာမို့ ပျော်စရာတွေ ဖန်တီးချင်ရင် သွားကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ သူလည်း ပဒုမ္မာလမ်းထဲမှာပါပဲ။
Friend's Fusion Sport Bar
Sport Bar ဆိုတဲ့အတိုင်း အားကစားဝါသနာပါတဲ့ ကိုကို၊ မမတွေအကြိုက်တွေ့မယ့် နေရာလေးပါ။ ဆိုင်လေးက တော်တော်လေးကျယ်ပြီး နှစ်ထပ်ရှိပါတယ်။ နာမည်ကြီးအသင်းတွေပါတဲ့ ဘောလုံးပွဲတွေကို အောက်ထပ်မှာ ပြသလေ့ရှိပြီး အပေါ်ထပ်မှာတော့ ဂိမ်းဆော့ချင်တဲ့ ဘော်ဒါတွေနဲ့ ဘိလိယက်သမားတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ။ အားကစားဝါသနာအိုးတွေ မဖြစ်မနေသွားသင့်တဲ့ Bar လေးတစ်ခုပါ။ ပဒုမ္မာလမ်း၊ Freedom Bar နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိပါတယ်။
ရန်ကုန်က နာမည်ကြီး ဘီယာဆိုင် Win ကနေပြီး ဖွင့်ထားတဲ့ Bar လေးပါ။ ဘီယာကလည်း သောက်ချင် ဒါပေမယ့် ဘီယာဆိုင်မထိုင်ချင်တဲ့ မဒီလေးကြောင့် အခက်တွေ့ရင်တော့ ဒီနေရာလေးက အဆင်ပြေစေမှာပါ။ Win ဘီယာဆိုင်နဲ့လည်း ကပ်ရက်မို့ အကင်တွေကိုလည်း ထုံးစံအတိုင်းမှာစားလို့ရတာပေါ့။ ဆိုင်က စမ်းချောင်းလမ်း Win ဘီယာဆိုင်ကပ်ရပ်မှာပါ။
The Lord Bar
ဘားတွေထဲမှာ ဒီ ဆိုင်လေးကိုထည့်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့ အပေါ်ကပြောခဲ့သလိုပဲ ဘီယာဆိုင်မထိုင်ချင်တဲ့ကောင်မလေးတွေပါ အကြိုက်တွေ့မယ့် ဘီယာဆိုင်မို့ပါ။ ပုံမှန်ဘီယာဆိုင်တွေထက် Premium ပိုဖြစ်သလို လူငယ်တွေအလာများတဲ့ ဆိုင်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ စားစရာ၊ သောက်စရာတွေကလည်း စုံလင်ပြီး ဆိုင်ကလည်း အပွင့် Type မို့ တစ်ရက်တစ်လေ ဘားမထိုင်ပဲ အပြင်ကို ငေးမောကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားဖောင်ဖွဲ့ကြည့်ပါနော်။ ရှင်စောပုလမ်းပေါ်မှာရှိပါတယ်။
Old Skool ဆိုတဲ့အတိုင်း သက်လတ်ပိုင်းတွေတော့ အလာများတယ်လို့ ပြောရမယ့် Bar ပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီဆိုင်က Unplugged နဲ့ စားစရာက တော်တော်လေးကောင်းတာမို့ အရင်ခေတ်အငွေ့အသက်တွေ ခံစားချင်ရင် သွားကြည့်သင့်တဲ့ Bar လေးပါ။ ဆိုင် Decoration ကလည်း မိုက်လို့ ဓာတ်ဖမ်းချင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း အိုခေစိုပြေပေါ့။ ပြည်လမ်းဘက်ကနေ ဝင်တဲ့ ရှင်စောပုလမ်းမဝင်ဝင်ချင်းမှာပါ။
Throw Back ကို ပုံလှလှလေးတင်ကြမယ်
The Singapore Tourism Board (STB) ကနေပြီး ခရီးသွားဝါသနာပြင်းပြသူတွေအတွက် အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အလှတရားကို ဖော်ထုတ်ပြသပေးနိုင်ရန် လူထုအခြေပြုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ #TravelThrowback ကမ်ပိန်းကို စတင်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာ ရှိတဲ့နေရာတော်တော်များများမှာ ခရီးသွားလာရေး ကန့်သတ်ချက်တွေ ရှိနေသေးပေမယ့်လည်း ဒီကမ်ပိန်းက လူမှုကွန်ရက်ကနေ ပဏာမခြေလှမ်းအဖြစ် အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွေအပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်စေဖို့နဲ့ ခရီးသွားတွေကိုလည်း နိုင်ငံတကာခရီးစဉ်များ အပြည့်အဝပြန်လည်စတင်တာနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှကို လေ့လာလည်ပတ်ချင်စရာ ဒေသတစ်ခုအဖြစ် ဦးစားပေးရွေးချယ်စေဖို့ ရည်ရွယ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
STB ရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှဒေသ Executive Director ဖြစ်တဲ့ Mr. John Conceicao ကလည်း
"ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်း ဆိုးရွားစွာထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အဓိက စီးပွားရေးကဏ္ဍတွေထဲမှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ နယ်စပ်ကန့်သတ်ချက်တွေ လျော့ချလိုက်တာနဲ့ ခရီးသွားတွေကလည်း အားလပ်ရက်ခရီးရှည်ထွက်ခြင်းထက် အရှေ့တောင်အာရှအတွင်း ခရီးတိုလည်ပတ်ခြင်းကို ပိုရွေးချယ်လာကြ လိမ့်မယ်။ #TravelThrowback ပဏာမခြေလှမ်းစတင်ခြင်းဟာ ကျွန်တော်တို့ဒေသရဲ့ အလှတရားကို ပြသနိုင်ဖို့နဲ့ ခရီးသွားတွေကို အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ လူသိနည်းပါးတဲ့ နေရာလေး‌တွေကို လေ့လာလည်ပတ်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။" လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
“လူမှုကွန်ရက်က ခရီးသွားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့နေရာမှာ အရမ်းလွှမ်းမိုးနိုင်တယ်။ အထူးသဖြင့် လုပ်ငန်းခွင်ဝင်စ လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့။ သက်လတ်ပိုင်း ခရီးသွားတွေကြားမှာတော့ Instagram ဟာ သူတို့သွားမယ့် ခရီးစဉ်တွေအတွက် အရမ်းလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိနေတယ်။ #TravelThrowback ကနေ တစ်ဆင့် အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ ကြွယ်ဝလှတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့ ခရီးသွားတွေနဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေကို လှုံ့ဆော်စုစည်းပေးပြီး သူတို့ရဲ့ အလှပဆုံးသော အမှတ်တရတွေ၊ မှတ်တမ်းတွေနဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို အရှေ့တောင်အာရှက ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ အရာတွေအဖြစ် မျှဝေပေးကြစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်” ဆိုပြီး ဆက်လက် ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Singapore Tourism Board (STB) က စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အဓိကဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံ့ထိပ်တန်း စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အေဂျင်စီတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ စင်္ကာပူနိုင်ငံအတွက် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အရှိန်အဟုန်နဲ့ ပွင့်လန်းလာစေရန် လူထုနဲ့ အတူတကွ ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.stb.gov.sg (သို့) www.visitsingapore.com (သို့) http://www.facebook.com/VisitSingaporeMM တွေမှာလည်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
အရှေ့တောင်အာရှက Instagram ခရီးသွားတွေအတွက် @Visit_Singapore ကနေ Instagram မှာသာ ရရှိနိုင်မယ့် သီးသန့်ဖန်တီးထားတဲ့ “TravelThrowback” Instagram Effect ကို အသုံးပြုပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံစုစည်းမှုတွေထဲက နှစ်သက်ရာ ခရီးသွားအမှတ်တရပုံတွေကို ဝေမျှနိုင်ပါပြီ။ ဒီ Instagram Effect အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြတဲ့ အရှေ့တောင်အာရှဒေသတွေက အမှတ်တရတွေကို ဝေမျှနိုင်ပြီး မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကိုလည်း အလားတူ ခရီးသွားခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေကို ပြန်လည်ဝေမျှရန် tag လုပ်ပြီး ဖိတ်ခေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ရန် အဆင့်အသေးစိတ်ကို အောက်မှာ ကြည့်လိုက်နော်။
#TRAVELTHROWBACK ကမ်ပိန်းအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန်အတွက်
၁။ @Visit_Singapore ၏ Instagram Page ကို သွားပါ။
၂။ Browse Effects သင်္ကေတ (IGTV သင်္ကေတဘေးတွင် ရှိသည်) ကို နှိပ်ပြီး #TravelThrowback Instagram Effects ကို download လုပ်ပါ။
၃။ အသုံးပြုသူများက #TravelThrowback Instagram Effects မှ throwback ကို အရှေ့တောင်အာရှရှိ နိုင်ငံ (၁၀) နိုင်ငံအထိ ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဘရူနိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီယား၊ အင်ဒိုနီးရှား၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ စင်ကာပူ၊ ထိုင်း နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများ၏ Effect များ ပါဝင်သည်။
၄။ ကိုယ်ပိုင် Instagram account ကို သွားပါ။
၅။ Instagram stories ကို ဖွင့်ပြီး download လုပ်ခဲ့ပြီးသော #TravelThrowback Instagram Effects ကို ရွေးချယ်ပါ။
၆။ အကယ်၍ စင်ကာပူနိုင်ငံကို throwback အနေနှင့် share မည်ဆိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ @Visit_Singapore ကို tag ပေးပါ။
၇။ throwback ခရီးသွားဓာတ်ပုံကိုထည့်ပြီး နေရာကို tag လုပ်ကာ #TravelThrowback hashtag လေးလုပ်ပေးပါ။
၈။ သူငယ်ချင်း သုံးယောက် နှင့်အထက်၊ ပရိသတ်များ၊ မိသားစုများကို tag ပြီး သူတို့၏ ခရီးသွား throwback အမှတ်တရများကို မျှဝေဖို့အတွက် challenge ခေါ်လိုက်ပါ။
ကိုယ်တိုင်ရောက်သွားသလိုခံစားရမယ့် Lifestyle Blogger လေး Ei Ei Dior ရဲ့ Singapore Trip
စင်ကာပူတခွင်ကို အိအိနဲ့အတူ စူးစမ်းလေ့လာစေချင်…
အခုလို ပြည်ပခရီးသွားလာခွင့်တွေ ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာလေးကို သတိတွေရပြီး နေမထိ၊ ထိုင်မသာဖြစ်နေကြမှာပါ။ ဒီလိုအချိန်မှာ စာဖတ်နေရင်း ပြည်ပကို ခဏလောက်ရောက်သွားမယ့် Lifestyle Blogger လေးအိ ပြောပြတဲ့ စင်ကာပူအတွေ့အကြုံလေးကို ခံစားမကြည့်ချင်ဘူးလား။
နေထွက်ကနေဝင် လမ်းလျှောက်ရင်းရှော့ပင်ထွက်ရတာကို မပင်ပန်းတဲ့သူ၊ ညသန်းခေါင်တစ်ရေးနိုးပြီး အစားကောင်းထစားတတ်တဲ့သူ၊ အမိုက်စားဓာတ်ပုံလေးတွေရဖို့ အချိန်ပေးပြီး ရိုက်တတ်တဲ့သူ ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ Checklist တွေကို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့က စင်ကာပူမှာ အသင့်တော်ဆုံးပဲပေ့ါ။ အိအိကလည်း စင်ကာပူ မှာရှိတဲ့ လည်ပတ်ချင်စရာ နေရာတွေနဲ့ ပျော်စရာနေရာလေးတွေကို အခုလို မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။
“အိကတော့ စူးစမ်းလေ့လာရတာ ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ အဆင်ပြေရင်ပြေသလို ခရီးသွားဖို့အခွင့်အရေးလေးတွေပဲ ရှာဖွေနေမိတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဒီအခက်အခဲကြီးကို အားလုံးအတူတူ ဖြတ်ကျော်နေကြရပြီး ခရီးတွေပြန်သွားလို့ရမယ့်နေ့ကို အားလုံး စောင့်မျှော်နေကြမယ်ဆိုတာ အိ သိတယ်လေ။ ဒီတော့ အိတို့တွေက အကောင်းဘက်က တွေးတဲ့ အနေနဲ့ နောက်ထွက်ဖြစ်မယ့် ခရီးလေးတွေအတွက် စိတ်ကူးလေးနဲ့ ကြိုစီစဉ်ထားလိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား?”
သာမာန်လေဆိပ်တစ်ခု မဟုတ်ဘူးနော်။ အမိုက်စားရေတံခွန်ကြီးလည်း ရှိနေပါသေးတယ်!!
လေဆိပ်ကိုရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ စင်ကာပူက သင့်ကို နွေးထွေးစွာကြိုဆိုနေမှာပါ။ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး လေဆိပ်တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပြီး အစားအသောက်တွေ၊ ဈေးဝယ်စရာနေရာတွေ၊ Spa တွေ၊ Hotel တွေအပြင် များပြားလှတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကို တစ်မိုးအောက်ထဲမှာတင် စုံစုံလင်လင် သင်ရရှိမှာပါ။ အသက်ရှူမှားရလောက်အောင် လှပတဲ့ အမိုက်စားရေတံခွန်ကြီးလည်း ရှိနေတယ်ဆိုတော့ သင့်ဘဝရဲ့ အကောင်းဆုံးအခိုက်အတန့်တွေကို ခရီးစဉ်မှာ သင်ရရှိလိုက်ဖို့ အသေအချာပဲပေ့ါ။ ကိုယ့်ခရီးစဉ် စတင်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ဓာတ်ပုံလေး တစ်ပုံ၊ နှစ်ပုံ ရိုက်ပြီး မှတ်တမ်းတင်ဖို့တော့ မမေ့နဲ့ပေ့ါနော့်။
Ei's Tips: မဖြစ်မနေ လည်ပတ်သင့်တဲ့ထဲမှာ Jewel လည်းပါတာမို့ လေယာဉ်ချိန်မတိုင်ခင် ၂ နာရီ ၃ နာရီလောက်ကို Jewel မှာ လည်ပတ်ဖို့ ချန်ထားသင့်တယ်နော်။ ခမ်းနားတဲ့ ရေတံခွန်ကြီး ပြီးသွားရင် သဘာဝအတိုင်း တည်ဆောက် ထားတဲ့ လမ်းလျှောက်အပန်းဖြေစရာဥယျာဉ်လေး တည်ရှိနေပါသေးတယ်။ ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတဲ့ လက်လီအရောင်း ဆိုင်လေးတွေနဲ့အတူ ခမ်းနားတဲ့ အရောင်းပစ္စည်းလေးတွေကလည်း လေယာဉ်မထွက်ခင်မှာ အချိန်ဖြုန်းဖို့အတွက် သင့်ကို ဆွဲဆောင်နေမှာပါနော်။
မဖြစ်မနေသွားရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့ Marina Bay
တစ်ကယ်လို့များ စင်ကာပူမှာ တစ်နေရာတည်းကိုပဲ သွားလည်ဖို့ အချိန်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Marina Bay ကိုပဲ ရွေးချယ် သင့်ပါတယ်နော်။ နာမည်ကြီး Gardens By The Bay ရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာ တည်ရှိပြီး အထင်ကရ ရေကူးကန်ကြီး ပါရှိတဲ့ Marina Bay Sands Hotel ကြီးကလည်း ဈေးဝယ်ထွက်ရတာ ကြိုက်တဲ့သူတွေရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို ပြည့်ဝစေမှာ အမှန်ပါပဲ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးမှာရှိတဲ့ အမှတ်တံဆိပ်တွေကို စုံစုံလင်လင်တွေ့မြင်နိုင်တဲ့အပြင် အဆင့်မီ စားသောက်ဆိုင် ကြီးတွေ၊ Bar တွေ၊ လောင်းကစားရုံ နဲ့ MARQUEE နိုက်ကလပ် တွေကိုလည်း တစ်နေရာတည်းမှာ တွေ့မြင် နိုင်ပါတယ်။ ဈေးဆိုင်တန်းလေးကနေ ထွက်လိုက်တာနဲ့ တွေ့မြင်ရမယ့် Art Science Museum ကလည်း လက်မလွတ် တမ်း သွားရောက်လည်ပတ်သင့်တဲ့ နေရာတစ်ခုပါပဲ။ အမြဲတမ်းဆန်းသစ်တဲ့ ပြပွဲတွေ ရှိတတ်တာမို့ ဘာအသစ် အဆန်း တွေ ရှိနေမလဲဆိုတာ မသွားခင်ကြိုစုံစမ်းသွားလိုက်ပေ့ါနော်။ နောက်ဆုံးတစ်ခုမှာချင်တာကတော့ စင်ကာပူရဲ့ ကြည်လင်လှပတဲ့ ကောင်းကင်ပြာကြီးကို နောက်ခံထားပြီး Merlion ရုပ်ထုကြီးနဲ့အတူ ဆယ်ဖီဆွဲဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ သင့်ရဲ့ဘယ်လိုစိတ်ကူးအိပ်မက်မျိုးကိုမဆို Marina Bay က တစ်နေ့တာအတွင်း အကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမှာပါ။
Ei's Tip: Garden By The Bay မှာ ညတိုင်း ကျင်းပလေ့ရှိတဲ့ Garden Rhapsody Light Show ကိုလည်း ကြည့်ဖြစ်အောင် ကြည့်သွားကြဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်နော်။ အရမ်းကိုမိုက်ပြီး အခကြေးငွေလည်း ပေးစရာမလိုတဲ့ အပြင် စင်ကာပူမှာရှိနေတဲ့ သင့်ရဲ့လှပတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့ကိုလည်း ပြီးပြည့်စုံစေမှာပါ။
သဘာဝရဲ့အနှစ်သာရတွေနဲ့ Gardens By The Bay
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးက အမျိုးအစားစုံလင်လှတဲ့ အပင်တွေကို လေ့လာမလား၊ တိမ်တိုက်တောအုပ်မြင့်ထဲ စွန့်စားခန်း ဖွင့်မလား၊ သံစဉ်တွေနဲ့ ယိမ်းထိုးကခုန်နေတဲ့ မီးရောင်တွေအလှဆင်ထားတဲ့ ဧရာမသစ်ပင်ပုံစံ အဆောက်အဦးထဲ ညစာ စားမလား သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်လို့ ရပါတယ်။ ဒီဥယျာဉ်ကြီးက သစ်ပင်ပန်းမန်၊ တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့ အနာဂတ် ဆန်တဲ့ ဥယျာဉ်မျိုးပါပဲ။ Insta-Spots ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ နေရာများစွာရှိလို့ နေရာတိုင်းကို သေချာအချိန်ပေးပြီး လေ့လာဖို့တော့ လိုမယ်နော်။
နေဝင်ချိန်ရောက်လာရင်တော့ နေရာတစ်နေရာမှာ ထိုင်ပြီး နေဝင်တာကိုငေးကြည့်ရင်း တစ်နေကုန် ကြုံတွေ့ခဲ့ရသမျှ ကို ပြန်တွေးရင်း အပန်းဖြေလိုက်တာ သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Ei's Tip: Gardens By The Bay မှာ ရှိတဲ့ လူလုပ် ဧရာမသစ်ပင်ကြီးတွေပေါ် တက်ပြီး ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ကောင်းတဲ့ ရှုခင်းကို ခံစားလိုက်ပါ။ ဒီအပင်ကြီးတွေက (၁၆) ထပ်လောက် အမြင့်ရှိပြီး အောက်ခြေကနေ (၇) ထပ် လောက် အမြင့်မှာ လျှောက်လမ်းတံတားလေးနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။
Shopping ထွက်ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် နိဗ္ဗာန်ဘုံ
စင်ကာပူဆိုတာကတော့ ဈေးဝယ်ရတာ ဝါသနာပါတဲ့ သူတိုင်းအတွက် တစ်ကယ့်နိဗ္ဗာန်ဘုံပါပဲနော်။ ဒီနိုင်ငံရဲ့ လမ်းထောင့်တိုင်းမှာ Shopping Center တွေကို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့်တော့ ခြေတိုတဲ့အထိ လျှောက်ပြီး ဈေးဝယ်နိုင်တဲ့ Orchard လမ်းတစ်လျှောက်မှာ ရှိတဲ့ မိုးထိမြင့်တဲ့ Sky-High Mall တွေပေ့ါ။ Branded တံဆိပ်မှ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူတွေအတွက်လည်း ကမ္ဘာ့အဆင့်မီ အမှတ်တံဆိပ်တွေ ရှိတဲ့အပြင် ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှာ ကြောက်တဲ့သူတွေအတွက်လည်း ကိုယ့်သုံးမယ့်ငွေပမာဏနဲ့ အဆင်ပြေမယ့် အမျိုးအစား တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။
Ei's Tip: တစ်ခြား ရှော့ပင်းမောလ်တွေနဲ့ မတူတဲ့ အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းနိုင်တာကတော့ Funan Mall ပါပဲ။ Mall အတွင်းမှာတင် စက်ဘီးစီးလို့ရတဲ့ လမ်းကြောင်းထားရှိပေးထားပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တူတူဆော့ကစားနိုင်တဲ့ rock climbing နံရံတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နာမည်ရ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်တွေ၊ အလျှံအပယ်များပြားတဲ့ စားသောက်ဆိုင် တွေ၊ ကော်ဖီဆိုင်တွေနဲ့ အတူ ဈေးနှုန်းသက်သာတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေလည်း ရှိနေပါသေးတယ်။
သင့်ရဲ့ Checklist ထဲမှာ ပါသင့်တာ တစ်ခုကတော့ စင်ကာပူမှာ High Tea သောက်ခြင်းပါပဲ။ ရိုးရာ အင်္ဂလိပ်စတိုင်လ် ကနေ Peranakan အရသာတွေကို အရှေ့တိုင်းနဲ့ အနောက်တိုင်း ရောစပ်ထားတဲ့ High Tea လေးက တစ်နေကုန် လျှောက်သွားထားလို့ ညောင်းညာနေတဲ့ သင့်ခြေထောက်ကို အနားပေးဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
Antidote, Arteastiq, Angelina, Salt & Grill Bar, Lantern Fullerton တို့ကတော့ ဆန်းသစ်တဲ့ အပြင်အဆင်တွေ ရှိတဲ့ Tea-set တွေကို ရရှိနိုင်ပြီး ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ အတူ အကောင်းဆုံး High Tea Session တွေကို ရရှိနိုင်တဲ့ နေရာတွေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ High Tea ရဲ့ ထူးခြားတဲ့ အရသာနဲ့ မွှေးပျံ့တဲ့အနံ့တွေက သင်တစ်နေ့တာ မောပန်းထား သမျှကို ပြေပျောက်စေမှာ အမှန်ပါပဲနော်။
Ei's Tip: အကြာကြီး တန်းစီးပြီး မစောင့်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ရက်အနည်းငယ်လောက် ကြိုပြီး စာရင်း ပေးထားဖို့ လိုမယ်နော်။
အသွားသင့်ဆုံး Insta-Spot တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Peranakan အိမ်ရာတန်းများ
စင်္ကာပူဟာ မရပ်မနား ပျားပန်းခပ်လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကမ္ဘာ့ အစည်ကားဆုံး မြို့တော်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ခေတ်ဟောင်းရော ခေတ်သစ်ဟန်ပါရှိတဲ့အပြင် အရောင်အသွေးအစုံ၊ အဆောက်အဦပုံအမျိုးမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကြောင့် ဘယ်နေရာလေးမဆို ဓါတ်ပုံလှလှရိုက်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေတာမို့ အလှအပတွေကို ရှု့မြင်ရင်း ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုလက်ရာတွေကို ချပြကြရအောင်။
မြင့်မားတဲ့အဆောက်အဦးတွေနဲ့ သန့်ရှင်းသပ်ရပ်နေတဲ့ လမ်းတွေကို နောက်ခံထားပြီး ရိုက်မလား၊ ဈေးတွေ၊ ဈေးဝယ် စင်တာတွေကို နောက်ခံထားပြီး ရိုက်မလား၊ ကိုယ်ကသာ နေရာရွေးမှန်မယ်ဆိုရင် နေရာတိုင်းက Instagrammable ဖြစ်စေတဲ့ ပုံတွေကို ရရှိနိုင်မှာပါနော်။
Ei's Tip: Katong Joo Chiat ဧရိယာတဝိုက်ကို လှည့်ပတ်ကြည့်လိုက်ရင် အိမ်ရာတန်းတွေကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပြီး အရသာကောင်းတဲ့ ဒေသတွင်း စားစရာတွေကိုလည်း တွေ့ရှိရမှာပါ။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရိုးရာအစားအစာတွေနဲ့ ညစာကို နှစ်ခြိုက်စွာသုံးဆောင်နိုင်တယ်နော်။
ခပ်စပ်စပ်ဟင်းလျာတွေနဲ့ ပင်လယ်စာ ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ စင်ကာပူရဲ့ ပြည်တွင်းဟင်းလျာလေးတွေကို အကြိုက်တွေ့မှာ အမှန်ပါပဲ။ အိ အကြိုက်တွေကတော့ Chilli Crab၊ Stingray၊ Sambal Kangkong၊ ကြက်ဆီထမင်း၊ Cockles (Lala) နဲ့ ဆာတေး တွေဖြစ်ပြီးတော့ လူကြိုက်များတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေဖြစ်တဲ့ Long Beach၊ Jumbo တို့လို စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ စားသုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း အရာအားလုံးကို သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ မြည်းစမ်းကြည့် ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အစားအစာကျေးရွာ (သို့မဟုတ်) Hawker Centres လို့ ဒေသခံတွေ ခေါ်ဝေါ်လေ့ရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ မြည်းစမ်းနိုင်ပါတယ်။ (ဥပမာ။ ။နယူတန်၊ East Coast၊ Seragoon)
Ei's Tip: အရသာပြည့်ဝတဲ့ ပြည်တွင်းဖြစ်ဟင်းလျာတွေကို သက်သာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ ရရှိတဲ့ထဲမှာ အိ အကြိုက်ဆုံးကတော့ Chinatown Complex Food Centre ပါပဲ။ လက်နဲ့ကိုင်ပြီး အားပါးတရ စားတဲ့အါ သုပ်ဖို့အတွက် တစ်သျှူး တစ်ထုပ်တော့ ယူသွားဖို့ လိုမယ်နော်။ ဒါမှမဟုတ် ဒေသခံတွေလုပ်တဲ့အတိုင်း ထိုင်ခုံနေရာ ကြိုဦးထားဖို့တော့ လိုပါမယ်။
Sentosa ဆိုတာကတော့ စင်ကာပူရဲ့ အမိုက်စားကစားကွင်းကြီးပါပဲ။ များပြားလှတဲ့ Amenities-action-themed နေရာတွေ၊ ကမ်းခြေ၊ Resort တွေ၊ စိတ်ဝင်စားစရာတွေ၊ စွန့်စားခန်းနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလို့ ရတဲ့နေရာတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ လောင်းကစားရုံလည်း ရှိပါတယ်။
Sentosa တစ်ခွင်လုံး နှံ့နေအောင် လည်မယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး (၂) ရက်လောက် အချိန်ပေးနိုင်မှ ဖြစ်မယ်နော်။ ပထမ တစ်ရက်ကို ကမ်းခြေနဲ့ အထင်ကရနေရာတွေ ဖြစ်တဲ့ Trick Eye Museum၊ Sea၊ Sea Aquarium၊ ကြိုးသွယ်ကား စတဲ့ နေရာတွေကို သွားလည်ပြီး နောက်တစ်ရက်ကိုတော့ The Universal Studio ကို သွားရောက် လည်ပတ်လို့ ရပါတယ်။
Ei's Tip: နေဝင်ဆည်းဆာကို ခံစားရင် တစ်ခွက်၊ နှစ်ခွက်လောက် သောက်လို့ရမယ့် Tanjong Beach Club ကို သွားလည် ဖို့လည်း မမေ့ကြနဲ့ဦးနော်။
စင်ကာပူရဲ့မတူကွဲပြားတဲ့ ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုနယ်ပယ်တွေကို လေ့လာပါ။
စင်ကာပူနိုင်ငံဟာ ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံရှိတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မတူကွဲပြားတဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဝတ်ပြုတဲ့အိမ်တွေနဲ့ ဘုရားကျောင်းတွေကို မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ မြင်တွေ့နိုင်တာက အဆန်းတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လူနေမှုပုံစံတွေနဲ့ ခေတ်သစ်အိမ်နီးချင်းတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေပါပဲ။ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ နယ်မြေ (၃) ခု ဖြစ်တဲ့ Kampong Glami။ China Town နဲ့ Little India စတဲ့ နေရာတွေကို နှံ့နှံ့စပ်စပ် လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်တော့ တစ်ရက် သီးသန့် ဖယ်ထားလိုက်ပါနော်။ သင်က ဘယ်ဘာသာဝင်ပဲဖြစ်ဖြစ် သင့်ကို ဒီနေရာက နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုနေမှာ အမှန် ပါပဲ။
Ei's Tip: တစ်ကယ်လို့များ ပုံမှာပါတဲ့ ဗုဒ္ဓစွယ်တော် ဘုရားကျောင်းနားတဝိုက်ကို ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ New Bridge လမ်းထောင့်တစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ စီခွAWျမ်းအစားအသောက်တွေကိုလည်း မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။ ဆူလ်တန် ဘလီနား ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ တာကီဟင်းလျာတွေနဲ့ အထင်ကရ တာကီလက်ဖက်ရည်တွေကို အပြင်မှာတင် မြည်းစမ်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ St. Andrew ဘုရားကျောင်းနားမှာ ပင်နီဆူလာပလာဇာ (သို့မဟုတ်) စင်ကာပူ ရဲ့ မြန်မာပြည် လို့ ခေါ်တဲ့ ပလာဇာ တည်ရှိပါတယ်။
အမှတ်တရတွေကို #TravelThrowback နဲ့အတူ ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါ။
အိက အခုလို ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းလေးလုပ်ပြီး စင်ကာပူက အကြိုက်ဆုံးအမှတ်တရတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်တို့လည်း စင်ကာပူမှာ အမှတ်တရတွေရှိရင် အိ တို့ကို မျှဝေပေးလိုက်ပါဦးနော်။ @Visit_Singapore Instagram Page (https://instagram.com/visit_singapore?igshid=4o098awt6t22) မှာရှိတဲ့ #TravelThrowback filter ကို သုံးပြီး မျှဝေပေးလို့ ရပါတယ်ရှင်။ အနာဂတ်မှာ စင်ကာပူ ခရီးစဉ်သွားရမယ့် နေ့ရက်တွေကို စောင့်စားရင်း အတိတ်က အမှတ်တရတွေကို မျှဝေလိုက်ကြရအောင်လေ။
ဓာတ်ဖမ်းချင်တဲ့ လူငယ်တွေနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး Where Am I? Tea House
2D အပြင်အဆင်နဲ့ ဓာတ်ဖမ်းလို့အရမ်းကောင်းတဲ့ Where Am I ကို Facebook မှာ ခဏ၊ ခဏ မြင်နေရမှာပါ။ ကိုးရီးယားနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ခေတ်စားတဲ့ ကော်ဖီဆိုင်ပုံစံဖြစ်လို့ နိုင်ငံခြားက ဆိုင်လို့အမှတ်မှားမိမှာပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံး 2D Cafe လို့ ပြောလို့ရသလို ရန်ကုန်နဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ မန္တလေးဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ မန္တလေး သွားလည်ရင် မဖြစ်မနေဝင်ခဲ့ရမယ့်ဆိုင်လေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ လူငယ်တွေ အသွားများတာတွေ့ရသလို အစားအသောက်တွေကလည်း တကယ့်ကို Fancy ဖြစ်လွန်းပါတယ်။ အဓိကကတော့ ပုံမှန်ထက် ထူးခြားတဲ့ ဆိုင်အပြင်အဆင်ကြောင့် ရေပန်းစားလာတာလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။
ဆိုင်လေးက နှစ်ထပ်ဖြစ်ပြီး နေ့လည်နေ့ခင်း အေးအေးလူလူ Chill လို့ရမယ့်နေရာလေးပါ။ တစ်ဆိုင်လုံးကို 2D Artwork နဲ့ အသေးစိပ် သေသေချာချာဆွဲထားတာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုတဲ့ ပန်းကန်တွေ၊ ခွက်တွေက အစ အဖြု၊ အမဲ Style နဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းနေပါတယ်။ ဓာတ်ဖမ်းဖို့အတွက် နေရာတိုင်းက လှနေတော့ ရောက်တာနဲ့ ဘယ်မှာ ရိုက်ရမှန်းမသိ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေမှာ ကျိန်းသေ။
ဒီဆိုင်က Bubble Tea က လူကြိုက်များပြီး Cake လေးတွေကလည်း ဆန်းဆန်းပြားပြားလေးတွေရှိလို့ Must Try ပါ။ အခြား စားစရာသောက်စရာတွေလည်း ရွေးချယ်စရာများပြီး အရသာကောင်းလို့ ဂျီးများတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ခေါ်သွားလို့ အဆင်ပြေမှာပါ။ ဈေးနှုန်းလေးတွေကလည်း ထင်ထားတာထက် သက်သာတာတွေ့ရပါတယ်။ စားခဲ့သမျှ အကြိုက်ဆုံးကတော့ Seasonal Fruit Honey Toast လေးပါ။
အမြင်ပိုင်းတော်တော်လေးလှသလို စားလို့လည်းတော်တော်ကောင်းတဲ့ Toast ပါ။ ဒီထဲမှာ ရာသီပေါ်အသီးအနှံတွေနဲ့ Ice Cream ထည့်ထားပါတယ်။ ဘေးက Cream ကလည်း ပေါင်မုန့်နဲ့ တော်တော်လေး တို့စားလို့ကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ ပေါင်မုန့်သား၊ ပေါင်မုန့်သားထူထူလေး လှီးထည့်ပေးထားပေမယ့် နူးနူးညံ့ညံ့နဲ့ တော်တော်လေးအရသာရှိပါတယ်။ ပုံထဲကလိုပဲ ခပ်များများပါဝင်တာမို့ နှစ်ယောက် သုံးယောက် လောက်စားနိုင်ပြီး ဈေးလည်းသက်သာတယ်နော်။
ဓာတ်ဖမ်းချင်တဲ့ ကောင်လေးတွေ၊ ကောင်မလေးတွေအတွက်ကော သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Bubble Tea သွားဖို့အတွက်ပါ ဒီဆိုင်လေးက Best Choice ဖြစ်မှာပါ။ လိပ်စာလေးက အမှတ် ၁၂၂၊ ၇၄လမ်း၊ ၃၁ x ၃၂ကြား၊ မန္တလေးမြို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ လူများတတ်လို့ ခပ်စောစောလေးသွားဖို့လည်း အကြံပေးချင်ပါတယ်။
ပြင်သစ်ကိုရောက်သွားသလို ခံစားမှုကိုပေးမယ့် Babett Eatery & Bar ရဲ့ Bastille Day Dining
French Lover တွေအတွက် ကွက်တိ။
ပြင်သစ်ဆိုတာနဲ့ Eiffel Tower ကို တန်းမြင်ကြမှာ ဖြစ်သလို ဇူလိုင် ၁၄ ရက်နေ့က ပြင်သစ်လူမျိူးတွေရဲ့ အမျိုးသားနေ့ဆိုတာလည်း ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိထားဖို့လိုမယ်နော်။ ဒီနေ့လေးက French Republic နိုင်ငံ ဆိုပြီးဖြစ်လာတဲ့နေ့ဖြစ်သလို ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ပြင်သစ်လူမျိူးတိုင်း ဆင်နွဲကြတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်က Babett Eatery & Bar မှာလည်း ပြင်သစ်အငွေ့အသက် အပြည့်ခံစားရမယ့် ပွဲလေးတစ်ပွဲကို စီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာမို့ ဟင်းလျာတွေမြည်းစမ်းဖို့ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကဲ ဒီနေရာမှာ Babett Eatery & Bar အကြောင်းလေးကိုလည်း နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ တည်းက ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Babett က Yangonain တွေအတွက် ပြင်သစ်ရိုးရာ စားသောက်မှုပုံစံကို အမှန်တကယ်ခံစားရအောင် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Beer၊ Wine၊ Cocktail စတဲ့ Beverage တွေကို French & Mediterranean ဟင်းလျာတွေနဲ့ တစ်နေရာတည်းမှာ သုံးဆောင်နိုင်မယ့် နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပါ။
Bastille Day ပွဲလေးမှာလည်း Babett Team ကနေပြီး အထူးစီမံပြင်ဆင်ထားတဲ့ အထူးဟင်းလျာသုံးမျိူးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းက ဟင်းလျာဖြစ်တဲ့ Bouillabaisse နဲ့ ပြင်သစ်လူမျိုးတွေရဲ့ ဟင်းပွဲမှာ မပါမဖြစ် နာမည်ကြီး Beef Bourguignon ကို Babett ဆိုင်ရဲ့ နာမည်ကြီး Truffle Mash Potato နဲ့ တည့်ခင်းည့်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထဲက Beef Bourguignon ကတော့ ကိုယ့်အတွက် Favourite အဖြစ်ဆုံး Dish လေးပါ။ Red Wine နဲ့ သေချာနှပ်ထားတာဖြစ်လို့ အသားက နူးအိပြီး စားလိုက်တာနဲ့ အရသာအပြည့်ခံစားရစေပါတယ်။ အမဲသားစားပြီဆိုတာနဲ့ မပါမဖြစ် Wine တွေကလည်း ရှိသေးတာမို့ Craving Satisfied ကို ဖြစ်လို့။ ဒီ Special Menu တွေကို ၂သောင်း ၂ထောင်တည်း ကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး Wine သုံးခွက် ရရှိနိုင်မှာဖြစ်သလို Ricard တစ်ခွက်ကို ၄၀၀၀ ကျပ်နှုန်းနဲ့လည်း ထပ်မံမှာယူနိုင်မှာပါ။ Ricard က Aniseed စေ့ အရသာနဲ့ ဖော်စပ်ထားတဲ့ ပြင်သစ်နိုင်ငံက အကောင်းဆုံး Beverage ဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်သစ်လူမျိူးတွေရဲ့ အနှစ်သက်ဆုံး ယမကာတစ်မျိူးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။
ပြင်သစ်ကို ရောက်သွားသလို ခံစားရမယ့် ဒီဟင်းလျာတွေကို Babett Eatery & Bar မှာ Bastille Day အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ Try ကြည့်နိုင်မှာမို့ Highly Recommend ပါ။ ရက်အကန့်အသတ်အနေနဲ့ ဇူလိုင် ၁၄ ရက်နေ့ကနေ ဇူလိုင် ၂၁ရက်နေ့အထိသာ ရရှိနိုင်တာမို့ အမြန်လေး Book ထားဖို့တော့လိုမယ်နော်။ ဆိုင်လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၅)၊ အလံပြဘုရားလမ်း ဖြစ်ပြီး နေ့လည် ၁၁နာရီကနေ ည ၁၀နာရီထိဖွင့်ပါတယ်။
ပျော်ရွှင်စရာအစီအစဉ်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေတဲ့ Singapore Nightlife
M Seng Lu နဲ့အတူ မြူးကြွ အသက်ဝင်နေတဲ့ Singapore Nightlife ကိုသွားရောက်စီးမျောကြည့်ရအောင်
Super Model M Seng Lu နဲ့ အတူ Weekend getaway အနေနဲ့ စင်ကာပူကိုသွားရင်းနောက်ထပ်ပြောပြချင်တာကတော့ အားလုံးစိတ်ဝင်စားကြမယ့် Singapore Nightlife အကြောင်းပေါ့ ။ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချက်အ ချာနေရာ တင်မဟုတ်ဘဲ နေဝင်ပြီ ဆိုတာနဲ့ နိုက်ကလပ်တွေ ဘားတွေ က သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ စင်ကာပူရဲ့ မြူးကြွလှုပ်ရှားနေတဲ့ Nightlife ဆိုရင်တော့ Clarke Quay က နေ စပြောရမှာပါပဲ။ လူစည်ကားပြီး စားသောက်စရာ အများကြီးရှိတဲ့နေရာသွားချင်ပါတယ်ဆိုရင် တော့ကျွန်တော့်အနေနဲ့ Clarke Quay ကို ညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။ Night out ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်း အရမ်းမိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့် ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ စင်ကာပူမြစ်ကမ်းဘေးမှာထိုင်ပြီး စကားပြောလို့ ကောင်းတဲ့နေရာလေးပါ။ မိသားစုနဲ့မှ သွားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ လူတွေအတွက်လည်း Clarke Quay ကသွားဖို့ သင့်တော်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ Clarke Quay မှာဆိုင်တွေများတယ်ဆို ပေမယ့် အစားအသောက်မကောင်းတဲ့ ဆိုင်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ။ မျက်စိမှိတ်ပြီးတောင် ဝင်ထိုင်ရင်တောင် အရသာရှိပြီးစားကောင်းတဲ့ဆိုင်တွေ ကမလွတ်ပါဘူး။ ဆိုင်တော်တော်များ များကလည်း Live Performance ရှိတော့ သောက်စရာတွေကလည်း များတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ Chill လို့ အရမ်းကောင်းတာပေါ့။
High end ဖြစ်တဲ့ Rooftop bar ကိုမှ သွားချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် Central Business District Area မှာရှိတဲ့ Empire Lounge ကို ညွှန်းချင်ပါတယ်။ Empire Lounge က ၄၅ ထပ်မှာရှိတဲ့အတွက် စင်ကာပူ ရဲ့ မကြည့်မဖြစ်တဲ့ Marina Bay Sand ရဲ့ LED Performance ကိုလည်းသူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ် ကော့တေးလ်တွေကို မြည်းစမ်းကြည့်ရင်း စင်ကာပူရဲ့ Nightlife ကို အပြည့်အဝ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ်။
အခုလာမယ့် သြဂုတ် ၉ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အမျိုးသားနေ့ မှာ လွှတ်တင်မယ့် မီးရှုးမီးပန်းတွေကိုလည်း တစ်မြို့လုံးရဲ့အပေါ်စီးကနေ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
Empire Lounge က outdoor ရှိသလို indoor area မှာလည်း အရမ်းမိုက်တဲ့ အပြင်အဆင်တွေနဲ့ တကယ်ကို Chill လုပ်ဖို့သင့်တော်တဲ့ Bar တစ်ခုပါ။
Empire Lounge ကိုသွားတဲ့ လူတော်တော်များများက Central Business District Area ကဆိုတော့ professional ကျပြီး စတိုင်ကျတဲ့သူငယ်ချင်းတွေအများကြီးလည်း ရနိုင်ပါတယ်။သွားမယ်ဆိုရင်တော့ သောကြာနေ့တို့ စနေနေ့တို့ကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Clarke Quay မှာ စားသောက်ပြီးရင်တော့ Clarke Quay Cannery Block ရဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ RedTail by Zouk ကို သွားရောက်လည်ပတ်စေချင်ပါတယ်။ RedTail Bar က ဆိုရင် သောက်ရင်းနဲ့ဆော့ရတဲ့ကစားနည်း တွေ ထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Beer pong တွေအပြင် တခြားကစားနည်းအများကြီးရှိတဲ့ Zouk Club ရဲ့ ကစားကွင်းအသစ် လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး ကစားလို့ရအောင် ဖန်တီးထားတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့အပြ င် အလုပ်ကပြီးလို့ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့တွေ့မယ် ဆိုရင်တော့ အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိတ်ရက်တွေမှာ ကလပ်တွေ ဘာတွေ မသွားရင် အရင် စားသောက်ကစားလို့ ကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုပါ။ အဲဒီကိုရောက်ရင် တော့ အာရှအကြိုက် အရသာတွေကို ဖန်တီးထားတဲ့ အစားအသောက်တွေ၊ စိတ်ကြိက်ဖန်တီး ဖျော်စပ်ပေးတဲ့ ကော့တေးလ် တွေ ဘီယာ ဝိုင် နဲ့ Zouk ရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ Blue Spin, Velvet Rope တွေကို မြည်းစမ်းကြည့်ဖို့ မမေ့နဲ့ဦးနော်။
ညတစ်ည ကို အကောင်းဆုံး အနားသတ်ပေးဖို့အတွက် ကတော့ ကမ္ဘာ့အသိအမှတ်ပြု DJ Top 100 Club စာရင်းဝင် ထိပ်တန်း ကလပ် ၅ ခုထဲ က တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Zouk Club ကို ပဲ သွားလိုက်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ စင်ကာပူ ရောက်ပြီး Zouk Club ကို မရောက်သေးရင်တော့ စင်ကာပူ ရဲ့Nightlife ကို ခံစားပြီးပြီလို့ တော့ ပြောလို့မရပါဘူးနော်။ Zouk ဆိုတာ ပြင်သစ်စကားဖြစ်ပြီး ပါတီ လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ Zouk Club က တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ် မထပ်အောင်ကို ပွဲတွေလည်းရှိနေပြီး အမိုက်စား ဒီဂျေ တွေနဲ့ဆိုတော့ အပတ်တိုင်းသွားရင်တောင် ပျင်းဖို့အချိန်တောင် မ ရလောက်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ Zouk သွားတဲ့နေ့ကအတွေ့ အကြုံကိုပြောရမယ်ဆို ရင်နေ့လည်မှာ Shopping တွေအကြီးအကျယ်ထွက်ထားလို့ ပင်ပန်းလွန်းလို့ ကလပ် ထဲမှာမကဲနိုင်လောက်တော့ဘူးလို့တွေးထားပေမဲ့ တကယ်တမ်း Zouk ကိုရောက်တဲ့အခါ Music တွေ Beat တွေကအရမ်းကိုကောင်းနေတော့ ခန္ဓာကိုယ်က သူ့အလိုလို လိုက်ကမိတော့တာပဲ။
တကယ်အမိုက်စား Beat တွေနဲ့ Sound system တွေကြောင့် အရမ်းကိုပျော်ခဲ့ကြပါတယ်။ မနက် ၄ နာရီမှပဲ M Seng Luနဲ့ အတူ ကလပ် က ပြန်ဖြစ်ကျပါတယ်။အဲ့လောက်ထိကို ပျော်စရာကောင်းတာကြောင့် ပင်ပန်းနေပြီ Zouk ကို မသွားတော့ဘူးလို့ မနေလိုက်နဲ့နော်။ Zouk ကို ရောက်ရင် ကိုယ် ဘယ်လောက်ထိ ကနိုင်လဲဆိုတာ သိသွားလိမ့်မယ်။ တကယ်လို့ အခုလို ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း အမြူးကြွဆုံး သံစဉ်တွေကို ခံစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ စင်ကာပူ က သင့်ကို မေ့မရနိုင်တဲ့အခုလိ weekend getaway ကို ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်လို့ လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
အပေါ်ကပြောသွားတဲ့ ကလပ် တွေ high end bar တွေ လည်းမသွားချင်ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘီယာလေးသောက်ပြီး အစားအသောက်ကောင်းကောင်းရနိုင်တဲ့ဆိုင်မျိုး မိတ်ဆက်ပေးပါဦး လို့ပြောရင်တော့ Esplanade မှာ ရှိတဲ့ Mischief ကိုညွှန်းပေးချင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး gathering လုပ်လို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်ပြီး လူငယ်ဆန်တဲ့ အပြင်အဆင်ကလည်း အရမ်းကို သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါတယ်။
စင်ကာပူရဲ့ “Passion Made Possible” ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်အတိုင်း Mischief ရဲ့ passion တွေနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ အစားအသောက်တွေကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ထူးခြားတာ တစ်ခု က သူရဲ့ menu တွေက အမေရိကန် နဲ့ အရှေ့တောင်အာရှ က ရိုးရာ အစားအသောက် တွေကို ပေါင်းစပ်ဖန်တီးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ M Seng Lu ရဲ့ အကြိုက်ဆုံး menu ဖြစ်တဲ့ Full Platter ကိုတော့ Mischief ရောက်ရင်စားကြည့်ဖို့မမေ့နဲ့နော်။
ကဲအခုဆိုရင် စင်ကာပူရဲ့ Weekend Getaway မှာ Super Model M Seng Lu ရဲ့ Nightlife ဖြတ်သန်းခဲ့ပုံလေးကို ပြောပြပြီးပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် Singapore Nightlife ကို ကိုယ်တိုင်ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်တယ်နော်။
#M Seng Lu
#Singapore Weekend Getaway
#MODA Food & Travel
#Singapore Night Life
ဝိတ်မလျော့နိုင်ဘဲ FOODIE M SENG LU ဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာ SINGAPORE WEEKEND GETAWAY ခရီးစဉ်
Great Singapore Sale ကြောင့် Shopping အတွက်လည်းအဆင်ပြေ Food Festival လည်းရှိနေတယ်ဆိုတော့လုံးဝလက်မလွှတ်သင့်ပါဘူးနော်..
ပိတ်ရက် ၃-၄ ရက်လောက် အချိန်ရတဲ့အခါတွေဆိုရင် ဘယ်ကိုသွားလို့သွားရမှန်း မသိတဲ့လူတွေရှိပါတယ်။ ကိုယ်လည်း အပါအဝင်ပေါ့။ ပြီးခဲ့တဲဲဲ့အပတ်ကပဲ Super Model M Seng Lu နဲ့ အတူ Weekend getaway အနေနဲ့ စင်ကာပူကိုသွားဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ စင်ကာပူ က အပတ်တိုင်းလိုလို ပွဲတွေလုပ်တတ်တော့ ကိုယ့်မိသားစုနဲ့ပဲ သွားသွား၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ဲပဲ သွားသွား ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပွဲတစ်ခုတော့ ရှိကိုရှိနေမှာလေ။ Music ကိုပဲကြိုက်သလား၊ ပြိုင်ကားတွေနဲ့ Formula 1 ပွဲသွားချင်သလား။ အားလုံးနဲ့ကိုအဆင်ပြေတဲ့ ပွဲတွေရှိနေတာပဲ။ နောက်တစ်ခုကလေး မြန်မာနိုင်ငံက ဘောလုံး ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အရမ်းကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ ပွဲတစ်ခုရှိတယ်နော်။ အဲ့ဒါကတော့ International Champions Cup Singapore 2019 ပေါ့။ Manchester United Fan တွေအတွက် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အသင်းကို အဝေးကြီးသွားစရာမလိုပဲ အနီးအနားမှာရှိတဲ့ စင်ကာပူ မှာကြည့်ရမယ့်အခွင့်အရေးမို့ လက်မလွတ်သင့်ဘူးနော်။ အခုဆိုရင် Great Singapore Sale: Experience Singapore ရှိတယ်ဆိုတော့ Shopping ထွက်ဖို့စိတ်ကူးထားတဲ့ လူတွေအတွက်ဆို ဈေးတွေအရမ်းတန်တာပဲ။ နောက်တစ်ခုက Singapore Food Festival ရှိတယ်ဆိုတော့ အစားတစ်လိုင်းဆိုတဲ့ လူတွေအတွက် လုံးဝကို ကွက်တိပဲ။ ဒီပွဲနှစ်ခုလုံးကအခုချိန်သွားရင် မှီသေးတယ်နော်။
ပထမဆုံး သွားဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာလေးတော့ သမိုင်းကြောင်းတွေ အရမ်းလှတဲ့ ဗိသုကာဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ Keong Saik Road ပေါ့။ တစ်လမ်းလုံးမှာ စင်ကာပူရိုးရာ ဗိသုကာလက်ရာတွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတဲ့ နှစ်ထပ် သုံးထပ်အိမ်လေးတွေ နဲ့ပြည့်နေတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ ကောင်းတဲ့ နေရာလေးဆို မမှားပါဘူး။ ပြီးတော့ Keong Saik Road က စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဟင်းလျာတွေတင် မဟုတ်ဘဲ Pasta၊ ဂျပန်အစားအစာ၊ ဟာဝိုင်အီအစားအစာ၊ Steak၊ Roast meat၊ Bakery တွေအပြင် Crafted Beer၊ ဝိုင်နဲ့ Cocktail တွေပါရနိုင်တဲ့ Bar တွေလည်း ရှိနေတာဆိုတော့ Foodie တွေအတွက်ကတော့ တကယ့် Paradise ပေါ့။ ဓာတ်ပုံလှလှ ရိုက်ချင်နေသူတွေ အတွက်လည်း Keong Saik Road က Wall Art တွေရှိတဲ့ အပြင် နောက်ခံမြို့ပြရဲ့ တိုက်တွေနဲ့ စင်ကာပူရိုးရာ ဗိသုကာအဆောက်အဦးတွေကတော့ အရမ်းကိုလှတဲ့ နောက်ခံ ပန်းချီကား တစ်ချပ်လို ဖြစ်နေမှာပါဘဲ။
Instagram : https://www.instagram.com/explore/tags/newubinseafood/
ဒီတစ်ခါသွားတဲ့ စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာဆိုရင် New Ubin Seafood ဆိုတဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကို မှတ်မှတ်ရရပဲ။ ဆိုင်က Crazy Rich Asian ရုပ်ရှင်ကားထဲက Wedding Scene ရိုက်တဲ့ Church ဝင်းထဲမှာရှိပါတယ်။ ဆိုင်ထဲမှာလူကလည်း အပြည့်ပဲ။ မိသားစုတွေလည်းရှိတယ်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ စားနေကြတဲ့ဝိုင်းလည်းရှိနေတော့ ဆိုင်တစ်ခုလုံးက လူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးပါပဲ။ ဆိုင်လေးက မွေးနေ့ပွဲတွေ ဘွဲရပြီး အောင်ပွဲခံတဲ့ပွဲတွေလိုမျိုး လူအများနဲ့ Celebrate လုပ်လို့လည်း ကောင်းတဲ့ ပုံလေးပါ။ ဒီဆိုင်ဘာလို့ို့အဲ့ဲ့လောက်ထိ နာမည်ကြီးနေရတာလဲလို့မေးရင် ဒီဆိုင်ဖွင့်တာအခုချိန်ထိဆိုရင် နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်တောင်ရှိခဲ့ပြီ။ ရိုးရာ Tze Char ဟင်းလျာတွေကို အသစ်ပြန် ထွင်ပြီး သူများနဲ့မတူအောင်ချက်နိုင်တယ်လေ။ Singapore ရဲ့ Tze Char အစားအစာလို့ ို့ပြောရင် အားလုံးကတော့ New Ubin Seafood ကိုပဲပြေးမြင်ကြပါတယ်။ New Ubin Seafood ကိုရောက်ရင်တော့ Chili Crab ကို Deep Fried Man Tou နဲ့ စားဖို့တော့ Recommend ပေးချင်ပါတယ်။ ဂဏန်းကအရမ်းကိုလတ်ဆတ်ပြီး သူ့ရဲ့အနှစ်ကို Man Tou လေးနဲ့ တို့စားတာအရမ်းကိုအရသာရှိတာပဲ။ စိတ်ကျေနပ်မှုကို ဒီဟင်းတစ်ခုနဲ့တင်အပြည့့််အဝရမှာသေချာပါတယ်။ Super Model ပါဆိုတဲ့ M Seng Lu တောင် ဝိတ်မလျော့နိုင်တော့ဘူး။ သူစားနေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီး ပြန်တောင်ပိုက်ဆာလာသလိုပါပဲ။
ညနေပိုင်းအချိန်လေးမှာဆိုရင် High Tea လေးသောက်ဖို့ Google မှာရှာလိုက်တော့ Tiong Bahru မှာရှိတဲ့ Plain Vanilla Bakery ဆိုတဲ့ဆိုင်လေးကိုတော့ အဲ့ဆိုင်လေးကို သွားခဲ့ဲ့ပါတယ်။
သူတို့ဆိုင်လေးက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လောက်ကတည်း ရှိနေတဲ့ အိမ်ယာထဲမှာဖွင့်ထားတာဆိုတော့ ဟောင်းနေပေမယ့် လှအောင်တော့အလှဆင်ထားတဲ့ neighborhood တစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။ ဒီ neighborhood ကတော့ စင်ကာပူနိုင်ငံသား တရုတ်လူမျိုးတွေနေကြတဲ့ area လေးတစ်ခုပေါ့။ Plain Vanilla Bakery ဆိုင်လေးက အစတုန်းက Take Away ဆိုင်လေးနဲ့ပဲစခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ အခုဆိုရင်ဆိုင်4ဆိုင်အထိဖွင့်နေပြီ။ Plain Vanilla Bakery က CupCake တွေ နဲ့ တခြား Cake တွေရွေးစရာအများကြီးရှိသလို Cake နဲ့ပက်သတ်တဲ့ Workshops တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ သူတို့ရဲ့ Cake တွေက Artificial တွေမပါတော့လူကြီးကလေးမရွေးစိတ်ချစွာနဲ့ စားနိုင်တာပေါ့။ Decoration ကိုသစ်သားတွေ မှန်တွေနဲ့ အပင်တွေ ကိုအဓိကသုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ အပြင်ကနေကြည့်လိုက်မယ်ဆိုင်ရင် ထိုင်ချင်စရာကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ဖြစ်နေတာတော့အသေအချာပါပဲ။ အဝင်ဝမှာတော့ မြက်ခင်းလေးလုပ်ထားတယ် ကလေးကစားစရာလေးတွေလည်းရှိတယ်။ အဖေအမေနဲ့ ကလေးတွေအတွက်လည်းနားရက်မှာ Chill လုပ်လို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးလည်းဖြစ်နေပြန်ရော။ နောက်တစ်ခုက ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်အရမ်းလှတယ်နော်။ စုံတွဲလေးတွေ အတွက်လည်း ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးတွေက ချစ်စရာကောင်းနေတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းတဲ့ ဆိုင်လေးလို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။ M Seng Lu ပုံလေးတွေကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လှတယ်ဆိုတာအသိအသာပါပဲ။ အစားအသောက်လည်းကောင်း၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ရင်လည်း လှတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်တာကြိုက်တဲ့လူတွေအတွက်တော့ ကွက်တိဖြစ်နေတာပေါ့။
Changi Airport ရောက်တော့လည်း Irvin's Salted Egg လေးကို မြည့်စမ်းခွင့် ရခဲ့ပါသေးတယ်။ အာလူးကြော် ကြွပ်ကြွပ်လေး ဒါမှမဟုတ် ငါးအရေခွံလေးကို ဆားဘဲဥလေးနဲ့ ရောထားတဲ့ အရသာက စင်ကာပူရောက်ရင် လုံးဝကို လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ အရသာလေး တစ်ခုပါ။ လက်ဆောင်ပေးဖို့ရော ကိုယ်တိုင်စားဖို့အတွက်ပါ အများကြီး ဝယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နောက်မှ Fashion နဲ့ Night Life အကြောင်းပြောပြဦးမှာမို့ စောင့်ကြည့်ကြဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
#MODA Food and Travel